अनसनरत डा. केसीको अवस्था थप जटिल बन्दै, अकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पार्ने चिकित्सक संघको घोषणा
बुधबार, श्रावन २, २०७५
काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै १९ दिन देखि अन्सनरत डा.गोविन्द केसीको स्वास्थ्य थप जटिल वन्दै गएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा अनसनरत डा. केसीको स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गम्भिर हुदै गइरहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन ।
चिकित्सकका अनुसार डा केसीको मुटुको गतिमा घटवढ भैरहेको र यो अवस्थामा जुनकुनै बेला पनि सिसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ । तर यो सुविधा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपलब्ध नभएकोले थप समस्या हुन सक्ने उनीहरुको भनाई छ ।
निरन्तर घटिरहेको सेतो रक्तकोशिका र बढ्दो संक्रमणका कारण झन जोखिम वढेको जनाइएको छ । रगतमा पोटासियम, म्यागनेजियम र क्यालसियमको मात्रा निकै कम भएको छ । यसरी इलेक्ट्रोलाइट्स घट्दा आउन सक्ने जोखिम बारे डा.केसी जानकार भएपनि माग पुरा नभएसम्म ती तत्वहरु लिन अस्वीकार गरेका छन् ।
नेपाल चिकित्सक संघले भोलिदेखि देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकारले कुनै पहल नगरेको भन्दै संघले भोली एक दिनका लागि आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको हो ।
सरकारले नै बनाएको विज्ञ टोलीले दिएको सुझावअनुसार चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई कार्यान्वयन गर्ने अग्रसर नभएको तथा डा. केसी जीवन रक्षाको लागि सरकारले ठोस पहल नगरेको संघको आरोप छ । एक दिन सेवा बन्द गराउदा पनि सरकार संवेदनशील नभए देशभर आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने चिकित्सक संघले चेतावनी दिएको छ ।
यसैबीच राष्ट्रिय चिकित्सक संघ र अखिल नेपाल प्रगतिशील जनस्वास्थ्यकर्मी महासंघ लगाएतका पेशागत संगठनहरुले नेपाल चिकित्सक संघले आह्वान गरेको आन्दोलनको विरोध गरेका छन् । दुई संगठनले काठमाण्डौमा पत्रकार सम्मेलन गरी नागरिकको स्वास्थ्या सेवाको अधिकारलाई वञ्चित गर्न नहुने भन्दै देशभरका सवै स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक र नर्सहरुले विरामीलाई सेवा दिने बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा मधेसी चिकित्सक सघ, राष्ट्रिय स्वास्थ्याकर्मी संघ, नेपाल नर्सिङ संघ र प्रध्यापकहरुले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने एक्यवद्धता जनाएका छन् । नेपालमा करिव ५ देखी ६ लाखको हाराहारीमा स्वास्थ्याकर्मीहरु रहेका छन् ।।